२ जनाको नानीको आमा भए पनि उनको रुपरंग र जवानीले नलोभ्याउने पुरुषहरु कमै हुन्थे । सबैले भन्ने गर्थे कि ''सिरान घरे मान्छे भने लाटा लाटा र रुप पनि परेको हैन तर श्रीमती भने बडो सुन्दर भेट्यायो। ,, सायद तिनीहरुलाई पनि सिरान घरे काकीको रुप रंगमाथि लोभ लागेर नै यस्तो भनेको हुनुपर्छ । त्यही सिरानघरे काकीसँग एकपटक सदरमुकाम बजार देखी फर्केर आउँदा साह्रै रमाइलो गरियो।साईनोले काकी परे पनि हामीबीच नजिकको साईनो भने थिएन। काम चलाऊदा फरक पर्दैनथ्यो। पढ्नुहोस् यही रुपा
मलाई भने उनको त्यो स्पर्शले उत्तेजना ल्याइदिएको थियो। चौतारीको शितल हावा खाँदै हामी सँगै बसेका थियौ । मलाई भने उनको त्यो चरम स्पर्शले अलि मन उथलबुथल भएसकेको थियो। यत्तिकैमा मैले आँट गरेर '' काकी भाका बसौंन भने।,,डरले मेरो स्वार थर्थराईरहेको थियो। तर संयोग नै भन्नु पर्ला उनलाई पनि यस्तै मन भएको थिएछ क्यार यो बीच बाटोमा हुँदैन पछि गोठालोमा बसाम्ला भन्नु भयो । अब मैले भन्न खोजेको कुराको आसय बुझिहाले । छेउमा गएर पछाडि कुम मुनीदेखी हात छिराएर उनको दुधका पोकाहरुलाई मसार्दै भने यो त झन एकान्त छ गोठालोमा त सबैले देख्छन । हे अर्काको मान्छेलाई छुने हैन है कानुन लाग्छ भन्दै त्यहाँबाट उठेर अलि पर सरिन । म पनि उनीसँगै सर्दै सजय भोग्नु परे पनि भोगुम्ला नि गल्ती गरे पछि त कायमी नै हुनु पर्‍यो नि हैन भन्दै फेरी उनको पोका पक्रिए ।२ जनाको नानीको आमा भए पनि उनको दुधको पोका गोलो र टम्म नै थियो जस्तो नै थियो जस्तो बिहे नगरेका केटीहरुको हुन्छ । मैले भन्देको छु है नआउनु है मेरो छेउमा फेरी पनि भाग्ने मुडमा नै थिईन । मैले यसपाली भने पक्रेर भित्तामा चेप्दै उनको चाक मसार्न थाले साह्रै गर्न मन लाग्यो र पो र काकी के त छाप लाग्ने हैन दाग लाग्ने हैन । जिन्दगी बाँचुञ्जेलको रमाइलो त हो नि मरी लानु के छ र भन्दै उनको चाक ढाड काँध गाला मसार्दै किस गर्न थाले ।नशाको बेला यौन उन्मातभित्र पग्ली सकेकी उनले पनि हैन कत्रो छ हौ चेपेर नै थाला पारी दिन्छु र पो भन्दै मेरो लाडोलाई पेन्टबाहिर देखि खेलाउन थालिन् । मैले पनि सजिलोको लागि मेरो फास्नर खोलिदिए । मैले उनलाई च्याप्प समातेर जुरुक्क उठाएर फलैचामा ल्याए । बिस्तारै उनलाई सुताएर उनीमाथि चढी पुती माथि बस्दै २ हातले उनको स्तन गोबर सोहरेसरी सोहर्दै माड्न थाले । उनले पनि मेरो लाडोलाई मज्जा मानेर खेलाउदै लाडो त गतिलो रहेछ यसलाई चेप्न त हैन मेरो ढ्वाङ नै पो च्याती देला जस्तो लाग्यो भनिन । किन काकी काकाको सानो छ हो? मैले उनका दुधका मुन्टा खेलाउदै सोधे । सानो छ बुढी औंला जत्रो मात्र हालेको र निकालेको नै थाह हुँदैन उनले खुलेर भनिन। यस्तो हो भने पहिला नै मलाई भन्नु पर्थ्यो नि त म हाजिर हुने थिए तपाईंको सेवामा । हो हो एलिना पूजा मालबाँसे माइली वसन्त राम्री तिर धाउदै ठीक्क हुन्छ हेर्छ चै हामी जस्तो नानीको आमालाई।।।? हा हा हा हा हा हा म हाँसे । चित्त बुझ्यो ? फेरी प्रश्न गरिन । हो नि त मैले पनि साकारत्मक जवाफ दिए ए साँच्ची ब्लु फिल्म हेरेका छौ ? छु किन यस्तै गर्ने हो ?हो भने लौन त चुसिदिनुस् भन्दै मैले मेरो लाडो उनको मुखमा लागेर राखी दिए । अन्त के त भन्दै उनले त मेरो लाडोलाई चुस्ना पो थालिन् ओहो फिल्ममा हेरेको बाहेक मैले कसै केटीहरुलाई यसरी मुखमा मैथुन गर्न दिएको थिईन बरु छिटो छिटो चिक्दा चिप्लिएर कन्ढोमा भने गाको थियो यसरी चिप्लिदा २/३ जना रोएका पनि थिए।मलाई त उनले मुखमा राखेर चुस्दै भित्र बाहिर निकाल्दा त चिकेको भन्दा पनि तातो पो लाग्यो । कुत्कुती लागेर उखरमाउलो भए । फुत्त बाहिर निकाले मेरो लाडो झन चम्केर सनक्क भएर ठन्केको थियो । खै म पनि चाटी दिन्छु मलाई पनि आज नौलो अभ्यास गर्न मन लाग्यो किन भने जति पहिला गरेको चिकामारीमा न मैले चुसाएको थिए न चाटेको नै । अहँ हुँदैन उनले भनिन् मेरो फोहोर छ । केही हुँदैन मेरो पनि त फोहोर नै त थियो नि त । लु त्यसो हो भने यो फलैचामा टाटानको मजेत्रो ओछ्याउँ भन्दै मजेत्रो ओछ्याईन अब म पनि उनको बिपरीत फर्केर सुत्दै टाङ फार्न लगाउदै उनको पुतीमा हात पुर्याए । ए काकीले त भर्नु हो भने त ३०० मिली लिटर र पानी नै झारी सकेकी थिएछिन नि प्यान्टी त धुनलाई भिजाको जस्तै लपक्क भै सकेको थियो । हत्त न पत्त पेन्टी फुकाली दिएर जिब्रोलाई उनको पुतीको टुप्पामा लगेर जोडे आहा खै के खै के र्याल नै र्याल भएको उनको पानी झरेको पुतीको स्वाद चिप्लो र कस्तो कस्तो लाग्यो तर नौलो तरिका भएर मैले खुब रुचीको साथ नै चाट्न थाले । म जति उनको पुतीमा जिब्रो छिराउथे उति उनी पनि मेरो लाडोलाई मुख भित्र घुसार्थिन । यो क्रम हामी बीच झन्डै ४५ मिनेट भयो मलाई अब अती भईसकेको थियो। मैले मुखमा नै झार्दिम…? भन्दै सोधे उनले त हुन्छ भन्दै झन जोडले पो भित्र बाहिर गरिदिन थालिन्। बढी नै मजा आएर भित्रै सम्म ठेलिदिएको त घोक्रो सम्मै पुगेछ क्यार लाडो निकालेर खोक्न थालिन् । के सारो ठेलेको हाम्रो चाही शारीर हैन कि क्या हो? भन्दै फेरी बिस्तारै चुस्ने काम सुरु गरिन । यो क्रम जारी रह्यो ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ।मेरो लाडो बाट फुसी झर्यो उनले यसलाई पनि निली दिईन ।
Posted by sexjob at 8:45 AM